ဝိတိုရိယ ဘုရင်မကြီးကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည် ပြန်ပို့ခိုင်းရတဲ့ ဇလွန်ပြည်တော်ပြန် ဘုရားသမိုင်း - Focus Myanmar
June 1, 2019 By Myanamr Plus in ဆောင်းပါ။ Tags: ဘုရား
မဟာသက္ကရာဇ် (၁၁၃) ခုနှစ်တွင် သဗ္ဗညုတ မြတ်စွာဘုရားသည် ရခိုင်ပြည့်ရှင် ဘုရင်စန္ဒသူရိယမင်း ပင့်ဖိတ်မှု ကြောင့် ညီတော် အာနန္ဒာနှင့်တကွ ငါးရာသောရဟန္တာများ ခြံရံလျှက်ဓည၀တီသို့ ကောင်းကင် ခရီး မှ ကြွချီတော်မူ ခဲ့ပေသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် သည်စန္ဒသူရိယမင်း အား မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါး နှင့်ဒါနကထာ စသောတရားများ ကိုဟော ကြား တော် မူလေသည်။ တရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူ ရသော ပြည်သူပြည်သား များသည်လဲ သူတော်ကောင်းတရားများကို သရဏဂုံဆောက် တည်ကြလေသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် အခြားသောဝေနေယျတို့အား တရားရေအေးတိုက်ကျွေးရန် ဓညဝတီမှ ပြန်လည်ကြွချီရပေမည် ။ စန္ဒသူရိယမင်းသည်လည်း မြတ်စွာဘုရားအားကိုယ်စားတော် ပုံသွင်းကို သွန်းလုပ်ကိုးကွယ်ခွင့်ပြု တောင်းပန်လျှောက်ထားလေ သည်။ မြတ်စွာဘုရားသည်လည်းအသင်ဒါကာ၏ ဆန္ဒကိုလည်းဖြည့်ကာ ငါဘုရား သာသနာတော် အဓွန့်ရှည်ရန် ကိုယ်စားရုပ်ပွားတော် ထားခဲ့ပေအံ့ဟုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ထိုနောက် စန္ဒသူရိယမင်းသည် သီရိဂုဏ် တောင်ပေါ်တွင် ခုနှစ်ရက်တိုင်ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့လေသည်။ ထိုပွဲကြီးကို စကြာဝဠာအရပ်ရပ်မှ ရောက်ရှိလာကြကုန်သော လူ၊နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊သိကြား ပရိသတ်တို့အားလုံးကိုလှူဒါန်းကြသော ရတနာများမှာ (၆၅) တင်းမျှရရှိလေသည်။
ဘုရှားရှင်သည် သိကြားမင်းနှင့် ၀ိသကြုံ နတ်သားတို့ကို ခေါ်ယူကာ ငါကိုယ်တော်နှင့် အတိုင်းအရှည် ပမာဏ ညီမျှမှန်ကန် သော ရုပ်ရှင်တော်မြတ်အား သွန်းလုပ်စေ ဟုမိန်ကြားခဲ့လေသည်။ သွန်းလုပ်ပီးသောအခါ ဘုရားရှင်သည် ရင်ငွေ့တော် ခုနှစ်ကြိမ်ပေးခဲ့ သဖြင့် မဟာမုနိဘုရားဟု ဘွဲ့တော်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်စားတော် မဟာမုနိသွန်းလုပ်ပြီး ကြွင်းကျန်သော ကြေး–ငွေ–ရွှေရတနာတို့ကို သွန်းလုပ်ကြရာ (၁) ရှင်ကျော် ၊ (၂) ရွှေဘုံသာ၊ (၃) မာရ်အောင်မြင် …. ဟူသော ရုပ်ပွားတော်ငယ်သုံးဆူ သွန်းလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းတုတော် သုံးဆူအနက်မှ
” ရန်အောင်မြင်ရုပ်ပွားတော် ” မှာ မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်၏ လက်ယာ ဘက်တွင် ထားပြီး ကိုးကွယ် ပူဇော်သောကြောင့်” လက်ယာ ရုပ်ပွားတော် ” ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ ပါတယ်။
စန္ဒသူရိယမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက် ခေတ်အဆက်ဆက် ကြာညောင်းသောအခါ သက္ကရာဇ် ၁၁၄၆ ခုနှစ်တွင် အမရပူရ ရွှေနန်းရှင် ဘိုးတော်ဘုရား၏ သားတော်အိမ်ရှေ့မင်းသီဟသူရ လက်ထပ်တွင်ဓည၀တီ ရခိုင်ပြည်ကို သိမ်းယူပြီး(၁) မဟာမုနိ ၊ (၂) ရွှေဘုံသာမုနိ ၊ (၃) မာရ်အောင်မြင်မုနိ ….ဘုရားသုံးဆူကို မင်းနေပြည်တော်တွင် ရဟန်းရှင်လူ၊ပြည်သူတို့ကိုးကွယ်ရန် ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပီး …….ရှင်ကျော်မုနိဘုရား……ကို ဓည၀တီ တွင်ပူဇော်ရန် ထားရစ်တော်မူ ခဲ့လေသည်။
အပြန်လမ်းတစ်လျှောက် ရခိုင်ရိုးမကိုဖြတ်ရာ ပြည်မြို့ အနောက်ဘက်ကမ်း တစ်နေရာတွင် စခန်းချနားခဲ့ရာ ရွာသူ၇ွာသား များမှ ဘုရားတစ်ဆူပေးသနားပါရန် တောင်းဆိုမူကြောင့် “ရွှေဘုံသာမုနိ ဆင်းတုတော်” ကို ကိုးကွယ်ရန်ထားခဲ့လေသည်။ ထိုမှစ ရွာငယ်ကို ရွှေဘုံသာ ရွာ ဟုခေါ်တွင်လေသည်။သို့ဖြင့် ဧရာဝတီဖြစ်ကြောင်းမှ ပင့်ဆောင်လာရာ “မာရ်အောင်မြင်မုနိ ” နှင့်” မဟာမုနိ” နှစ်ဆူတို့ကို ရွှေနန်းတော် တည်ရာ အမရပူရသို့ ပင့်ဆောင်လာသည်။ ရွှေနန်းတော်ကြီး၏ မြောက်ပြင်အရပ်တွင် အုတ်ဂန္ဓကုဋိတိုက်တော် တည်ဆောက်ပြီး “မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်” ကို ကိုးကွယ်ထားရှိတော်မူလေသည်။ မာ၇်အောင်မြင်ဘုရားကို နန်းဦးတွင် ကိုးကွယ်ထားရှိသောကြောင့်
“ နန်းဦးဘုရား ” ဟု ဘွဲ့တော်ပေးခဲ့ ပြီး မင်းအဆက်ဆက်ကိုးကွယ် ရာ ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့သောကြောင့် ” ဆုတောင်းပြည့် ဘု၇ား ” ဟု ဘွဲ့တော် တစ်ခုထပ်တိုးလေခဲ့ပေသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၂၁၄ ခုနှစ် ၊ ပုဂံမင်းလက်ထက် ဇလွန်မြို့သူကြီး ဦးရွှေပွင့်သည် ကျွန်တော်မျိုး အုပ်ချုပ်ရသော ဇလွန်မြို့တွင်တစ်မြို့လုံး လှူဒါန်းသော ရွှေငွေကြေးတို့ဖြင့် ကြေးသွန်းဘု၇ားတစ်ဆူ ပြုလုပ်ရန် လျှောက်တင်ခဲ့ရာ ပုဂံမင်းတရားကြီးက ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့လေသည်။ မြို့သူ–မြို့သားများ ကိုးကွယ်ရန် ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူသွန်းလုပ်ရန် တစ်မြို့လုံး လှူဒါန်း သော ရွှေငွေကြေးသံ တို့ကို (ရန်လွင့်) ခေါ် လှေကြီးနှင့်တင်ပြီး အမရပူရသို့ရောက်ရှိလာပြီး အစ်မဝမ်းကွဲတော်သူ ပုဂံမင်း မိဖုရားကြီးထံ ဝင်ရောက်ခစားကာ ပန်းပဲဖိုဆရာ မောင်မောင်လတ် အား ခေါ်ယူပြီး မိဖုရားကြီးက ရုပ်ထုတော် သွန်းလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်တွင် ပုဂံမင်းနှင့် မင်းတုန်း၊ ကနောင်မင်းတို့ မသင့်မတင့်ဖြစ်ကာ နေပြည်တော်တွင် အရေးအခင်း များပေါ်ပေါက် လာသဖြင့် ဦးရွှေပွင့် သွင်းလုပ်နေသော ရုပ်ပွားတော် သွန်းလုပ်မှုများ မပြီးစီးသဖြင့် ဇလွန်မြို့ အပြန်တွင် နန်းဦးရုပ်ပွားတော်ကို ပင့်ဆောင် သွားပီး မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော ရုပ်ပွားတော်ပြီးမှ တမန်တော်များဖြင့် အကြောင်းကြားရန်မှာပြီး ဇလွန်သို့ ပြန်ဠာခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အောက်မြန်မာပြည် ကိုအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့ သိမ်းယူပြီး ကြေးဆင်းတု တော်အမြောက်အများနှင့် ကြေးအိုး၊ ကြေးခွက် အစအနပါမကျန် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဇလွန်မြို့ ” မာရ်အောင်မြင် ဘုရား ” ကိုပါ သိမ်းယူပြီး ဆာဂျွန်ဆင်ဆိုသူ ကုလားဖြူဗိုလ်က (ရွှေဆင်) ဆိုသော သင်္ဘောဖြင့် တင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘုံဘိုင်မြို့သို့ရောက်သော အခါ ကြေးဆင်းတုများကို ကျိုပြီး ကြေးပိုက်ဆံ ကျည်ဆံလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
“မာရ်အောင်မြင် ဆင်းတုတော် ” မှာမူ မီးနှင့်ကြိုရာ အရည် မပျော်ပဲ မိုးကြီးလေကြီးများ ကျရောက်ကာ မီးကျိုသူ အင်္ဂလိပ် ကျွန်များ (၆၄) ဦး သွေးအန် ဝမ်းလျှော သေဆုံးကုန်ကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် ဝိတိုရိယဘုရင်မကြီးမှာ ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာများ ၊ဆရာဝန်များ ကုသမရပဲ ရှိသဖြင့် တစ်ညတွင် ဘုံဘိုင်ရှိ ဗမာဘုရားကို မူလနေရပ်သို့ ပြန်ပို့မှ ရောဂါပျောက်ကင်းမည် ပြန်မပို့ပါက နတ်ရွာစံမည် ဟု…အိမ်မက် မြင်မက်သဖြင့် ဘုံဘေရှိ ဂိုဒေါင်အတွင်းရှာဖွေပြီး မြန်မာပြည် သို့ ပြန်ပို့ မှသာ ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်ဟု ဆိုခဲ့ ပါတယ်။ထိုကြောင့် ၀ိတိုရီယဘုရင်မကြီးအမိန့် အရ နေရင်းအရပ် သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေး ခဲ့လေသည်။
ဟင်္သာတ မြို့သူ–မြို့သားများသည် မြစ်စတွင် ရုပ်ပွားတော် ကို တွေ့ကြသောအခါ အလွန်ဝမ်းမြောက်ကာ “ပေါ်တော်မူဘုရား” ဟု ဘွဲ့တော်တွင်လေပြန်သည်။ ထိုသတင်း ကိုကြားသော ဇလွန်မြို့ တွင်နေထိုင်သော ဆရာတော်ဦးဖြူက ပေါ်တော်မူဘုရားကြီးကို ဖူးရန် ဟင်္သာတမြို့သို့ ကြွတော်မူခဲ့လေ သည်။ ဟင်္သာတ မြို့သို့ရောက်သော ဘုရားဖူးရာ” မာရ်အောင်မြင် ရုပ်ပွားတော်” မှန်းသိလေရာ ဟင်္သာတအပိုင်မှ ကြေးကန် ဆရာတော် ဘုရား နှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းလေသည်။ ထိုအခါတွင် ကြေးကန်ဆရာတော်ဘုရား က ဇလွန်မြို့ မာရ်အောင်မြင်ဘုရားဟု မည့်သည့် အထောက်အထား ပြနိုင် သလားဟုမေးရာ ဆရာတော်ဦးဖြူ ကဘုရားရှင်၏ စမ္မခဏ်တော်မှာပါရှိသော ဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ပြရာ တစ်ထပ်တည်း ကျနေပြီး မည်မျှမငြင်းနိုင်တော့ပေ………
ထိုအခါ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အချေတင်ဖြစ်နေရာ အရေးပိုင်မင်းက ကြားဝင်စေ့စပ်ရတော့သည်။ ဖောင်တော်ထက်တွင် ဘုရားကို ပင့်ဆောင် ပြီး မြစ်လယ်တွင် ဇလွန်နှင့် ဟင်္သာတ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် အနိုင်ဆွဲကြစေသည်။
ထိုအချိန်အခါတွင် ဆရာတော်ဦးဖြူက ဟင်္သာတမြို့ဘက် လှေအရေအတွက်များပြီး ဇလွန်မြို့ဘက်က လှေအရေအတွက် နည်းသောလည်း ဇလွန်မြို့မှဘုရားအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါက မြတ်စွာဘုရားပျော်မွှေ့ရာ ဘူမိနက်သန် ဇလွန်မြေကိုသာ ကြွတော်မူပါရန်တိုင်တည်ပါသည်ဘုရားဟု တိုင်တည် ခဲ့လေသည်။ထိုအခါ ရေစုန်တွင်လဲ ဇလွန်မြို့ဘက်သာပါပြီး တဖန်ပြန်လည်ဆွဲကာ ရေဆန် တွင်လဲဇလွန်မြို့ဘက်ကိုသာ ပါပေသည်။
ထိုမှစ ဇလွန်သူ ၊ ဇလွန်သား မိမိတို့မြို့မှ မာရ်အောင်မြင် မြတ်စွာဘုရားကြီးသည် နေရင်းရပ်သို့  ပြန်လည်ကြွချီလာ သော ကြောင့် အစွဲပြုကာ ” ဇလွန်မာရ်အောင်မြင်ပြည်တော်ပြန် မြတ်စွာဘုရား ” ဟုဘွဲ့အမည်ဖြင့် ဟင်္သာတမြို့အနီး ဇလွန်မြို့ရှိ စံကျောင်းတော်တွင် ကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူလျှက်ရှိရာ ပြည်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးခရီးသည်များဖြင့်စည်ကားသိုက်မြိုက်လျှက်
Credit – xyznews.com
ဝိတိုရိယ ဘုရငျမကွီးကိုယျတိုငျ မွနျမာပွညျ ပွနျပို့ခိုငျးရတဲ့ ဇလှနျပွညျတျောပွနျ ဘုရားသမိုငျး
မဟာသက်ကရာဇျ (၁၁၃) ခုနှဈတှငျ သဗ်ဗညုတ မွတျစှာဘုရားသညျ ရခိုငျပွညျ့ရှငျ ဘုရငျစန်ဒသူရိယမငျး ပငျ့ဖိတျမှု ကွောငျ့ ညီတျော အာနန်ဒာနှငျ့တကှ ငါးရာသောရဟန်တာမြား ခွံရံလြှကျဓညဝတီသို့ ကောငျးကငျ ခရီး မှ ကွှခြီတျောမူ ခဲ့ပသေညျ။ မွတျစှာဘုရားရှငျ သညျစန်ဒသူရိယမငျး အား မငျးကငျြ့တရားဆယျပါး နှငျ့ဒါနကထာ စသောတရားမြား ကိုဟော ကွား တျော မူလသေညျ။ တရားတျောကိုဟောကွားတျောမူ ရသော ပွညျသူပွညျသား မြားသညျလဲ သူတျောကောငျးတရားမြားကို သရဏဂုံဆောကျ တညျကွလသေညျ။
မွတျစှာဘုရားသညျ အခွားသောဝနေယေတြို့အား တရားရအေေးတိုကျကြှေးရနျ ဓညဝတီမှ ပွနျလညျကွှခြီရပမေညျ ။ စန်ဒသူရိယမငျးသညျလညျး မွတျစှာဘုရားအားကိုယျစားတျော ပုံသှငျးကို သှနျးလုပျကိုးကှယျခှငျ့ပွု တောငျးပနျလြှောကျထားလေ သညျ။ မွတျစှာဘုရားသညျလညျးအသငျဒါကာ၏ ဆန်ဒကိုလညျးဖွညျ့ကာ ငါဘုရား သာသနာတျော အဓှနျ့ရှညျရနျ ကိုယျစားရုပျပှားတျော ထားခဲ့ပအေံ့
ဟုခှငျ့ပွုတျောမူခဲ့သညျ။ ထိုနောကျ စန်ဒသူရိယမငျးသညျ သီရိဂုဏျ တောငျပျေါတှငျ ခုနှဈရကျတိုငျခမျးနားစှာကငျြးပခဲ့လသေညျ။ ထိုပှဲကွီးကို စကွာဝဠာအရပျရပျမှ ရောကျရှိလာကွကုနျသော လူ၊နတျ၊ ဗွဟ်မာ၊သိကွား ပရိသတျတို့အားလုံးကိုလှူဒါနျးကွသော ရတနာမြားမှာ (၆၅) တငျးမြှရရှိလသေညျ။
ဘုရှားရှငျသညျ သိကွားမငျးနှငျ့ ဝိသကွုံ နတျသားတို့ကို ချေါယူကာ ငါကိုယျတျောနှငျ့ အတိုငျးအရှညျ ပမာဏ ညီမြှမှနျကနျ သော ရုပျရှငျတျောမွတျအား သှနျးလုပျစေ ဟုမိနျကွားခဲ့လသေညျ။ သှနျးလုပျပီးသောအခါ ဘုရားရှငျသညျ ရငျငှတေ့ျော ခုနှဈကွိမျပေးခဲ့ သဖွငျ့ မဟာမုနိဘုရားဟု ဘှဲ့တျောထငျရှားခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျစားတျော မဟာမုနိသှနျးလုပျပွီး ကွှငျးကနျြသော ကွေး–ငှေ–ရှရေတနာတို့ကို သှနျးလုပျကွရာ (၁) ရှငျကြျော ၊ (၂) ရှဘေုံသာ၊ (၃) မာရျအောငျမွငျ …. ဟူသော ရုပျပှားတျောငယျသုံးဆူ သှနျးလုပျကိုးကှယျခဲ့ပါတယျ။ ဆငျးတုတျော သုံးဆူအနကျမှ
” ရနျအောငျမွငျရုပျပှားတျော ” မှာ မဟာမုနိရုပျပှားတျော၏ လကျယာ ဘကျတှငျ ထားပွီး ကိုးကှယျ ပူဇျောသောကွောငျ့” လကျယာ ရုပျပှားတျော ” ဟု ချေါတှငျခဲ့ ပါတယျ။
စန်ဒသူရိယမငျးနတျရှာစံပွီးနောကျ ခတျေအဆကျဆကျ ကွာညောငျးသောအခါ သက်ကရာဇျ ၁၁၄၆ ခုနှဈတှငျ အမရပူရ ရှနေနျးရှငျ ဘိုးတျောဘုရား၏ သားတျောအိမျရှမေ့ငျးသီဟသူရ လကျထပျတှငျဓညဝတီ ရခိုငျပွညျကို သိမျးယူပွီး(၁) မဟာမုနိ ၊ (၂) ရှဘေုံသာမုနိ ၊ (၃) မာရျအောငျမွငျမုနိ ….ဘုရားသုံးဆူကို မငျးနပွေညျတျောတှငျ ရဟနျးရှငျလူ၊ပွညျသူတို့ကိုးကှယျရနျ ပငျ့ဆောငျသှားခဲ့ပီး …….ရှငျကြျောမုနိဘုရား……ကို ဓညဝတီ တှငျပူဇျောရနျ ထားရဈတျောမူ ခဲ့လသေညျ။
အပွနျလမျးတဈလြှောကျ ရခိုငျရိုးမကိုဖွတျရာ ပွညျမွို့ အနောကျဘကျကမျး တဈနရောတှငျ စခနျးခနြားခဲ့ရာ ရှာသူရှာသား မြားမှ ဘုရားတဈဆူပေးသနားပါရနျ တောငျးဆိုမူကွောငျ့ “ရှဘေုံသာမုနိ ဆငျးတုတျော” ကို ကိုးကှယျရနျထားခဲ့လသေညျ။ ထိုမှစ ရှာငယျကို ရှဘေုံသာ ရှာ ဟုချေါတှငျလသေညျ။သို့ဖွငျ့ ဧရာဝတီဖွဈကွောငျးမှ ပငျ့ဆောငျလာရာ “မာရျအောငျမွငျမုနိ ” နှငျ့” မဟာမုနိ” နှဈဆူတို့ကို ရှနေနျးတျော တညျရာ အမရပူရသို့ ပငျ့ဆောငျလာသညျ။ ရှနေနျးတျောကွီး၏ မွောကျပွငျအရပျတှငျ အုတျဂန်ဓကုဋိတိုကျတျော တညျဆောကျပွီး “မဟာမုနိရုပျရှငျတျောမွတျ” ကို ကိုးကှယျထားရှိတျောမူလသေညျ။ မာ၇ျအောငျမွငျဘုရားကို နနျးဦးတှငျ ကိုးကှယျထားရှိသောကွောငျ့“ နနျးဦးဘုရား ” ဟု ဘှဲ့တျောပေးခဲ့ ပွီး မငျးအဆကျဆကျကိုးကှယျ ရာ ဆုတောငျးပွညျ့ခဲ့သောကွောငျ့ ” ဆုတောငျးပွညျ့ ဘုရား ” ဟု ဘှဲ့တျော တဈခုထပျတိုးလခေဲ့ပသေညျ။
သက်ကရာဇျ ၁၂၁၄ ခုနှဈ ၊ ပုဂံမငျးလကျထကျ ဇလှနျမွို့သူကွီး ဦးရှပှေငျ့သညျ ကြှနျတျောမြိုး အုပျခြုပျရသော ဇလှနျမွို့တှငျတဈမွို့လုံး လှူဒါနျးသော ရှငှေကွေေးတို့ဖွငျ့ ကွေးသှနျးဘုရားတဈဆူ ပွုလုပျရနျ လြှောကျတငျခဲ့ရာ ပုဂံမငျးတရားကွီးက ခှငျ့ပွုတျောမူခဲ့လသေညျ။ မွို့သူ–မွို့သားမြား ကိုးကှယျရနျ ရုပျပှားတျော တဈဆူသှနျးလုပျရနျ တဈမွို့လုံး လှူဒါနျး သော ရှငှေကွေေးသံ တို့ကို (ရနျလှငျ့) ချေါ လှကွေီးနှငျ့တငျပွီး အမရပူရသို့ရောကျရှိလာပွီး အဈမဝမျးကှဲတျောသူ ပုဂံမငျး မိဖုရားကွီးထံ ဝငျရောကျခစားကာ ပနျးပဲဖိုဆရာ မောငျမောငျလတျ အား ချေါယူပွီး မိဖုရားကွီးက ရုပျထုတျော သှနျးလုပျစခေဲ့ပါတယျ။
ထိုအခြိနျတှငျ ပုဂံမငျးနှငျ့ မငျးတုနျး၊ ကနောငျမငျးတို့ မသငျ့မတငျ့ဖွဈကာ နပွေညျတျောတှငျ အရေးအခငျး မြားပျေါပေါကျ လာသဖွငျ့ ဦးရှပှေငျ့ သှငျးလုပျနသေော ရုပျပှားတျော သှနျးလုပျမှုမြား မပွီးစီးသဖွငျ့ ဇလှနျမွို့ အပွနျတှငျ နနျးဦးရုပျပှားတျောကို ပငျ့ဆောငျ သှားပီး မိမိပွုလုပျခဲ့သော ရုပျပှားတျောပွီးမှ တမနျတျောမြားဖွငျ့ အကွောငျးကွားရနျမှာပွီး ဇလှနျသို့ ပွနျဠာခဲ့လသေညျ။ ထို့နောကျ အောကျမွနျမာပွညျ ကိုအင်ျဂလိပျနယျခြဲ့တို့ သိမျးယူပွီး ကွေးဆငျးတု တျောအမွောကျအမြားနှငျ့ ကွေးအိုး၊ ကွေးခှကျ အစအနပါမကနျြ သိမျးပိုကျခဲ့သညျ။ ဇလှနျမွို့ ” မာရျအောငျမွငျ ဘုရား ” ကိုပါ သိမျးယူပွီး ဆာဂြှနျဆငျဆိုသူ ကုလားဖွူဗိုလျက (ရှဆေငျ) ဆိုသော သင်ျဘောဖွငျ့ တငျယူသှားခဲ့ပါတယျ။ ဘုံဘိုငျမွို့သို့ရောကျသော အခါ ကွေးဆငျးတုမြားကို ကြိုပွီး ကွေးပိုကျဆံ ကညျြဆံလုပျခဲ့ကွပါတယျ။
“မာရျအောငျမွငျ ဆငျးတုတျော ” မှာမူ မီးနှငျ့ကွိုရာ အရညျ မပြျောပဲ မိုးကွီးလကွေီးမြား ကရြောကျကာ မီးကြိုသူ အင်ျဂလိပျ ကြှနျမြား (၆၄) ဦး သှေးအနျ ဝမျးလြှော သဆေုံးကုနျကွတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ဝိတိုရိယဘုရငျမကွီးမှာ ခေါငျးကိုကျ ဝဒေနာ ပွငျးထနျစှာ ဖွဈပွီး ဒေါကျတာမြား ၊ဆရာဝနျမြား ကုသမရပဲ ရှိသဖွငျ့ တဈညတှငျ ဘုံဘိုငျရှိ ဗမာဘုရားကို မူလနရေပျသို့ ပွနျပို့မှ ရောဂါပြောကျကငျးမညျ ပွနျမပို့ပါက နတျရှာစံမညျ ဟု…အိမျမကျ မွငျမကျသဖွငျ့ ဘုံဘရှေိ ဂိုဒေါငျအတှငျးရှာဖှပွေီး မွနျမာပွညျ သို့ ပွနျပို့မှသာ ရောဂါပြောကျကငျးသှားသညျဟု ဆိုခဲ့ ပါတယျ။ထိုကွောငျ့ ဝိတိုရီယဘုရငျမကွီးအမိနျ့ အရ နရေငျးအရပျ သို့ ပွနျလညျပို့ဆောငျပေး ခဲ့လသေညျ။
ဟင်ျသာတ မွို့သူ–မွို့သားမြားသညျ မွဈစတှငျ ရုပျပှားတျော ကို တှကွေ့သောအခါ အလှနျဝမျးမွောကျကာ “ပျေါတျောမူဘုရား” ဟု ဘှဲ့တျောတှငျလပွေနျသညျ။ ထိုသတငျး ကိုကွားသော ဇလှနျမွို့ တှငျနထေိုငျသော ဆရာတျောဦးဖွူက ပျေါတျောမူဘုရားကွီးကို ဖူးရနျ ဟင်ျသာတမွို့သို့ ကွှတျောမူခဲ့လေ သညျ။ ဟင်ျသာတ မွို့သို့ရောကျသော ဘုရားဖူးရာ” မာရျအောငျမွငျ ရုပျပှားတျော” မှနျးသိလရော ဟင်ျသာတအပိုငျမှ ကွေးကနျ ဆရာတျော ဘုရား နှငျ့ တှဆေုံ့ညှိနှိုငျးလသေညျ။ ထိုအခါတှငျ ကွေးကနျဆရာတျောဘုရား က ဇလှနျမွို့ မာရျအောငျမွငျဘုရားဟု မညျ့သညျ့ အထောကျအထား ပွနိုငျ သလားဟုမေးရာ ဆရာတျောဦးဖွူ ကဘုရားရှငျ၏ စမ်မခဏျတျောမှာပါရှိသော ဂုဏျတျောကိုရှတျပွရာ တဈထပျတညျး ကနြပွေီး မညျမြှမငွငျးနိုငျတော့ပေ………
ထိုအခါ တဈဖကျနှငျ့တဈဖကျအခတြေငျဖွဈနရော အရေးပိုငျမငျးက ကွားဝငျစစေ့ပျရတော့သညျ။ ဖောငျတျောထကျတှငျ ဘုရားကို ပငျ့ဆောငျ ပွီး မွဈလယျတှငျ ဇလှနျနှငျ့ ဟင်ျသာတ သူ့ဘကျ ကိုယျ့ဘကျ အနိုငျဆှဲကွစသေညျ။
ထိုအခြိနျအခါတှငျ ဆရာတျောဦးဖွူက ဟင်ျသာတမွို့ဘကျ လှအေရအေတှကျမြားပွီး ဇလှနျမွို့ဘကျက လှအေရအေတှကျ နညျးသောလညျး ဇလှနျမွို့မှဘုရားအစဈအမှနျဖွဈပါက မွတျစှာဘုရားပြျောမှရေ့ာ ဘူမိနကျသနျ ဇလှနျမွကေိုသာ ကွှတျောမူပါရနျတိုငျတညျပါသညျဘုရားဟု တိုငျတညျ ခဲ့လသေညျ။ထိုအခါ ရစေုနျတှငျလဲ ဇလှနျမွို့ဘကျသာပါပွီး တဖနျပွနျလညျဆှဲကာ ရဆေနျ တှငျလဲဇလှနျမွို့ဘကျကိုသာ ပါပသေညျ။
ထိုမှစ ဇလှနျသူ ၊ ဇလှနျသား မိမိတို့မွို့မှ မာရျအောငျမွငျ မွတျစှာဘုရားကွီးသညျ နရေငျးရပျသို့ ပွနျလညျကွှခြီလာ သော ကွောငျ့ အစှဲပွုကာ ” ဇလှနျမာရျအောငျမွငျပွညျတျောပွနျ မွတျစှာဘုရား ” ဟုဘှဲ့အမညျဖွငျ့ ဟင်ျသာတမွို့အနီး ဇလှနျမွို့ရှိ စံကြောငျးတျောတှငျ ကိနျးဝပျစံပါယျတျောမူလြှကျရှိရာ ပွညျနယျ အရပျရပျမှ ဘုရားဖူးခရီးသညျမြားဖွငျ့စညျကားသိုကျမွိုကျလြှကျ